हिन्दु अतिबादीहरु अलकायदा र आइएस भन्दा कम छन् ? - MONGOL KHABAR
हिन्दु अतिबादीहरु अलकायदा र आइएस भन्दा कम छन् ?
२५ मई, २०१३ बुद्ध जयन्तिको दिन अपमानजनक रुपमा सुर्खेतको कांक्रेबिहारमा राखिएको यो बुद्ध मुर्ति जिल्ला प्रशासनले उखेली जंगलमा फालेको थियो । तिब्र बिरोधपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा रुखमा बाधेर झुन्दाई राखेको छ ।
देश बनाउने प्रतिबद्धता बाचाहरु पटक–पटक सुनियो बाहुन क्षेत्रीको मुखबाट । बनाएको कहिल्यै पाइएन । बरु किर्ते गरेर, आतंक मच्चार, नरसंहार मच्चाएर, निमुखाहरुलाई कज्याएर शोषण गरे बिध्वंश मच्चाएर देशलाई विश्वकै गरिव बनाए । जन्मिदै अबोध बालकको टाउकोमा २५ हजार रिणको भार बोकाउन सफल भए ।विश्व युद्ध, कालापानीको लडाईहरुमा ज्यानको बलि दिन लगाउने स्वार्थी बाहुन क्षेत्रीहरु पण्डित बनेर भारत र युकेमा कार्यरत मंगोलहरुलाई महाभारत, रामायनको श्लोकबाट कसम खिलाएर युद्धमा होमाएर उनीहरु हरेक बटालियनमा महान गुरु नै भएर बसे ।
माओबादीको दश वर्षे युद्धको बयान गरेर साध्य छैन । माओवादीले गरेको कसाई युद्धमा गोलीको सिकार मात्र होइन आइमाई केटा केटीहरुलाई धम्काई धम्काई बलत्कार गर्ने र निर्मम हत्या गर्ने कामहरु भए । हिन्दु समाजमा नारीको महत्व हुँदैन किनकी शुद्र, पशु र नारी एउटै हो भनिएको छ । त्यसैकारण नारीलाई होइन गाइलाई बढि सम्मान जनाउछन बाहुन क्षेत्रीहरु । बाहुन र क्षेत्री आफूलाई उच्च जातका ठान्छन किनकी उनीहरु नारीले जन्म नदिएर ब्रम्हाले मुख र पाखुराबाट जम्माएकाले पनि नारी माथि गिद्धे नजर डाल्छन । फेरी ब्रम्हा आफैले पनि छोरीलाई स्वास्नी बनाएका पात्र हुन् । त्यसकारण नारी जो बाहुनी भए पनि उसलाई बच्चा उत्पादनको साधन मात्र मान्छन ।
‘अरुभन्दा हामी आर्य (हाल काला भई सकेका बाहुन क्षेत्री) उच्च छौँ, सबै नै हाम्रो अरन खटनमा चल्नु पर्छ डाडु पन्यु पनि हाम्रै हातमा हुनु पर्छ हामी नै सभ्य हौ’ भन्ने छुद्र प्रबृत्तिकै कारण नेपाल र भारतमा अहिन्दुहरु जहिल्यै त्राशमा बाँच्न बाध्य छन् ।
भारतमा हिन्दु आतंकबाट बच्न गुरुनानकले सिक धर्मको स्थापना गरी मुखतोड जवाफ दिन प¥यो । जिन्हा पहिला हिन्दुकै शुद्रमा राखिएका योग्य पुरुष थिए । बाहुन क्षेत्रीको आतंक र अतिबादी बिचारलाई खरो प्रतिवाद गर्दै इस्लाम धर्म ग्रहन गरे । उनीहरुकै अहंकारको परिणाम पाकिस्तान जन्मिन पुग्यो । पाकिस्तानको जन्म दिएर नेतृत्व दिन सक्ने ब्यक्तिले देश चलाउन सक्ने थिएनन र ? पक्कै सक्थे तर प्रथम भारतीय प्रधानमन्त्री बाहुन नै बनाउनु पर्छ भन्ने धारणा अतिवादी बाहुन क्षेत्री मान्यता थियो । किन भने एक मुसल्मान शुद्रलाई राज्य चलाउनु दिनु हुन्न भन्ने संकृर्ण सोचाइ बोकेका थिए । अम्बेडकर तत्कालिन समयमा गान्धि, नेहरु लगायत थुप्रै हस्तिहरु भन्दा माथिल्लो दर्जाका बिद्धान हुन् । उनले जति अरु बाहुन क्षेत्रीले पढेका पनि थिएनन् ।
त्यसता महान बिद्धान माथि हिन्दुबादीहरुले कहिल्यै बिद्धान देखेनन् । जहिले पनि शुद्र नै देखे । उनलाई मात्र होइन, सिंगो सोशित समाजलाई आतंक मच्चाएर मान्छेको दर्जामा आतंकीत बनाएर राखेको सह्य नभए पछि एकै दिनमा ५ लाख सोशित मूलबासी समाजलाई बुढिष्ट बनाएको इतिहास हाम्रो सामु छ । उनको २२ ओटा प्रतिज्ञाहरुमा हिन्दु कर्मकाण्ड मान्दिन भनेर सपथ खाएर मात्र पक्का बुढिष्ट बन्न सक्ने कुरा सिकाएर गए । पहिलो कारण नै बाहुन क्षेत्रीको अत्यन्त अतिबादी आतंकारी बाहुन क्षेत्रीको कारण हिन्दुको बिरुद्ध उभिएर उनले हिन्दु धर्मबाट छुटकारा पाउनु र बुद्ध धर्म ग्रहण गर्नु नर्क देखि मुक्ति पाए सरह भएको प्रतिक्रिया जनाए ।
नेपालमा बुद्ध माथि जुन प्रकारको बाहुन क्षेत्रीहरुको अपमान छ । सामान्य होइन । यदि बुद्धका सन्तानहरु हिन्दु बाहुन क्षेत्री जस्तै बिद्रोही भएको भए भयकंर क्रान्ति हुने थियो । बुढिष्टहरु जहिले पनि शान्ति शान्ति भनेकाले हिन्दुहरुले मिचेर थिचेर, पेलेर, हेपेर बुद्ध दर्शनलाई बद्नाम गराए । द्रब्य शाह देखि शुरुवात भएको शाहकालिन इतिहासमा घटेका घट्ना सुन्दै रगत उम्लिन्छ । त्यस्तो अत्याचार गर्ने, नाक, कान, पेट ताछिएको घट्नाहरु कति क्रुर र निर्दयी थिए ? आफैमा यि घट्ना असान्य हुन् । राणाले १०४ वर्ष गरेको अत्याचार कुनै आतंकारी बिद्रोहीहरुको भन्दा कम थियो ? जतिबेला अधिकारको आवाज उठाउनेहरु जंगेको हातबाट टुक्रिनु प¥यो । जुनबेला शिक्षाबाट बञ्चित गरियो । बाहुनलाई उकासेर लग्ने काम भए । ७० वर्षको अवधिमा बाहुन र क्षेत्रीले पालै पालो सत्ता चलाई रहेका छन् यो के आइएस र अतिबादी हिन्दुबादीहरु भन्दा कम छ ?
रामायणमा नारीलाई सम्मान गरेको भए सीतालाई किन खेलौनाको पात्र बनाए ? मिथिलामा नरेशहरु मध्ये सबभन्दा बिद्वान दुरदर्शी ख्यातिप्राप्त राजा जनक थिए । मिथिलामा एकचोटी अनिकाल प¥यो । पण्डित जीहरुले भविष्यवाणी गरेकी राजा जनकले सुनको हलो जोत्दा खेतमा एउटी बालिका भेटिइन, उनले नवजात बालिकालाई ल्याए पाले पछि तिनै सीताका रुपमा चर्चित भइन भन्ने प्रसंगले देखाउछ । सीता भनेको एउटा गुडिया हो, खेलौना हो ।
माक्र्सबादका नाम जपेर कम्युनिष्टको खोल ओढेर जनतालाई सपना बाँडे अन्ततः माक्र्सवादको नाममा हिन्दु अतिवाद नै मुख्य माध्यम बनाई जनतालाई हिन्दु अतिवादका आधारमा आतंकीत पार्ने काम भएको छ । लेनिन र माओको नाममा पनि हिन्दु अतिवादले चुर्लम्मै दुवायो । नेपालका कम्युनिष्टहरुको उदय हुनु र राजा महाराजाहरुको अन्त्य हुनुमा आखिर कुनै भिन्नता देखिएन । कांग्रेस धनिहरुको सामन्तीको पाटी नै भइ हाल्यो अरु कम्युनिष्ट भन्नेहरु गुण्डा गर्दि गरेर आतंक फैलाउनु र सोझा जनताको पशिना लुट्नु खानु जस्ता जघन्य अपराध र आतंकले पकड जमायो । राजा महेन्द्र भन्दा अघि देखिकोे सत्ता बाहुनहरुको पकडमा परेको छ । कहिले शासुको पालो कहिले बुहारीको भन्ने उप्ति झै कहिले क्षेत्री कहिले बाहुनहरुले मुलुकमा आतंक पारी बिध्वंश मच्चाएका छन् ।
कालापानी कार्गील युद्ध, दश वर्षे माओवादी कसाई युद्ध, राजाहरुको तानाशाहि कदम र अहिलेको बाहुनतन्त्र हिटलर, अलकायदा, आइएसहरु भन्दा पनि बिद्रोही देखिन्छ । न कसैको आवाज सुन्छ, न बुझेर विश्वास नै दिलाउछ । त्यो भूकम्पले के बिनास गरेको छ , जति बाहुन क्षेत्रीले बिनास निम्त्याएका छन् । भएको चिज नष्ट गरेर अर्को चिजको उत्पादन वा विकल्प नै नखोज्ने डर लाग्दो बिद्राही हुन् ।
यसकारण नेपालका समस्त शोसनमा पारिएका, विभेदमा पारिएका, उत्पिडनमा पारिएका नागरिक आतंकै आतंकको राज्य ब्यवस्था स्वीकारेर दास भएर बाँच्न परेको छ । यसर्थ बिद्रोही बिदेशी बाहुन क्षेत्रीको सत्ताको निम्ति यहाँ गुरुनानक जस्तो भएर, अम्बेडकर जस्तो र बुद्ध जस्तो बनेर मुखतोड जवाफ दिन पनि अनिवार्य जस्तै भएको छ । त्यसैले बिनाशकारी अतिबादी शासनको अन्त्यको लागि सबै मूलबासी मंगोल अग्रसर हुन नितान्त आवश्यक छ ।
स्रोत मंगोल भिजनबाट